Guqula idatha ye-CAD kwi-GIS nge-ArcGIS Pro-Geofumed
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ukuguqula idatha ye-CAD kwi-GIS nge-ArcGIS Pro
ArcGIS-ESRIUkufundisa i-CAD / GIS
Ukuguqula idatha eyakhiwe ngenkqubo ye-CAD kwifomathi ye-GIS yinto eqhelekileyo, ngakumbi kuba ubunjineli boqeqesho olufana nophando, i-cadastre okanye ulwakhiwo lusasebenzisa iifayile ezakhelwe kwiinkqubo zekhompyuter eziyiliweyo (CAD), ezinengcinga yokwakha engajoliswanga. kwizinto kodwa kwimigca, iipoligoni, amaqela kunye neelebheli ezikwiindawo ezahlukeneyo (maleko). Nangona iinguqulelo ezintsha zesoftware ye-CAD zineendlela ezijolise kwinto kunye nokunxibelelana nendawo yolwazi, ukungqinelana phakathi kwezi nkalo kusafuna iinkqubo zenguqu.
Yintoni ekulindeleke ukuba ifumaneke: ukususa ngokwemaleko ukusuka kwifayile CAD kwi-GIS, kamva ngokuhlalutya le ndawo, ngokuba lo mzekelo sisebenzisa ifayile CAD equlathe ulwazi lomhlaba cadastral, ulwazi lokuhlola amanzi, okt imilambo kunye nezinye izakhiwo kwakhiwa.
Oko ufanele uyenakho ekupheleni kwenkqubo kuluhlu lomhlaba, uluhlu lwemilambo kunye nobunqamle bezakhiwo, ifomathi yokuqala yolawulo ngalunye luthobela uhlobo lwemvelaphi.
Idata efumanekayo kunye nempahla: ifayile ye-CAD, kule ngxaki i-Dwg ye-AutoCAD 2019.
Ulandelelwano lweeNyathelo nge-ArcGIS Pro
Isinyathelo 1. Ngenisa ifayile yeCAD
Njengoko kuboniswe ngasentla kufuneka ube nefayili .dwg, .dgn okanye .dxf, (ifomathi ye-CAD), ikhethwe kwithebhu imephu ukhetho Yongeza idatha, apho ifayile ehambelana nayo iyakhangelwa. Apha kuqala kweli nqanaba ingxaki yokubonisa idatha ngohlobo lwefayile, bekukho ifayile .dwg ngaphakathi AutoCAD 2019, xa umgca ungena kwi-ArcGIS Pro, inkqubo ifunda isethi yamacwecwe, kodwa kwitafile zembonakalo ibonakala ukuba iziqulatho aziqukethe nayiphi na into, njengoko inokubonwa kulo mfanekiso olandelayo.
Xa ubukela ifayile yokuqala, kwi-AutoCAD Civil3D ibonakala ukuba inolwazi.
Ngaphambi kokukholelwa ukuba ifayile yonakalise okanye ayinakho ulwazi, kuyimfuneko ukuba ithathe ingqalelo kwiinguqu ze-dwg zamkelwe yi-ArcGIS Pro:
Ngokuba .dwg kunye .dxf
Ukufunda, kodwa kungathunyelwa ngaphandle: 12 kunye ne-13 inguqu ye-AutoCAD
Ukufunda ngokuthe ngqo nokuthumela: Iinguqulelo AutoCAD 2000 v15.0, 2002 v15.0, 2004 v16.0, 2005 v16.1, 2006 v16.2, 2007 v17.0, 2008 v17.1, 2009 V 17.2, 2010 v18.0, 2011 v18.1, 2012 v18.2, 2013 v19.0, 2014 v19.1, 2015 v 20.0, 2016 v20.1, 2017 v21.0 kunye ne2018 v22.0.
Ukufunda, kodwa kungathunyelwa ngaphandle: MicroStation 95 v5.x, MicroStation SE v5.x, MicroStation J v 7.x
Ukufunda ngokuthe ngqo nokuthumela ngaphandle: MicroStation V8 v 8.x
Njengoko ubona, ngexesha lokulungiselela le khokelo, iArcGIS Pro ayikuxhasi ukufunda kunye nokuthumela idatha kwi-AutoCAD 2019, ke akukho nto iboniswayo ngombono, into ehlekisayo kukuba iArcGIS Pro ayibonisi iimpazamo ngexesha ukunamathela kulwahlulo, kwaye alumkisi ukuba ifayile ayihambelani nohlobo. Layisha ulwazi ngesakhiwo seCAD kodwa ngaphandle kwedatha.
Emva kokuqaphela oku, kuyimfuneko ukuyisebenzisa TrueConverter ukuguqula ifayile ye-dwg, kulo mzekelo siye senze kwinguqulo ye-2000.
Isinyathelo 2. Guqula idatha esuka kwifayili ye-CAD kwi-SHP
Izicatshulwa ofuna ukuzithatha ziyachongwa, ukuba zonke iinkcukacha ze-CAD ziyadingeka, kufuneka sizithumele kuphela into nganye njengefomathi, xa iCAD ikhethiwe, ityhulwa ibonakala. Zixhobo ze CAD, kwizixhobo onokuzifumana kwinkqubo Khuphela I zixhobo, iphaneli ivula ukubonisa iiparitha zokufakelwa kunye neziphumo; entry umaleko ekhethiweyo kulo mzekelo iziza, kwaye imveliso enokwenziwa kwifayile eyahlukileyo okanye geodatabase ezinxulumene neprojekthi, xa nkqubo ukubaleka ekhuselekileyo kongezelelwa isiqulatho ifomati ezikroziswayo ipheyini ibe .shp.
Isinyathelo 3. Hlaziya ukuhambelana kweengongoma ezingaphelelanga
Kukho ne-gap, eyenziwa kwifomathi ye-polyline xa i-GIS (ifom) isuswa. Njengoko izimo ezizaliswayo zithatha ifomathi yangaphambili, iziqendu kunye nelagoon kulo mzekelo, kufuneka ziguqulwe kwiipolgoni, kuxhomekeke kwimeko kunye nemfuno
Kwimilambo, inkqubo yenziwa ngesiqhelo, nangona kunjalo, kufunyenwe ukuba owona mlambo mkhulu kunye neerhafu zenziwe ngamacandelo amaninzi. Ukuzijoyina, khetha ithebhu Hlela, - sixhobo Hlanganisa, kwaye oku kudibanisa amacandelo ahambelana nomlambo oyintloko, kunye necandelo ngalinye leentlawulo zalo.
Ungabona kwakhona ukuba kumgca oqulethe imilambo kukho umgca, ngenxa yokuma kunye nendawo yayo, ayikho yolo lucalulo, lupheliswa, ngokuhlela uluhlu olusele lusele.
Kutheni le nto iipolylines kunye nezinto zibonakala zingadibani nejometri yeepasile? Umgangatho ofanelekileyo uvela kwinkqubo ye-CAD yokucoca izinto ezingangqinelaniyo, nangona kunjalo, ngeenjongo zalo msebenzi wenziwe ngale ndlela. Njengomzekelo, ifayile yemithombo yayinebhloko ye-3D ene-twist ethile, evela kwifayile ye-AutoCAD Recap, xa imelwe kumbono we-2D iba yipolline.
Xa ububupolisa bebuye bahlaziywa kwiFayili yeCAD:
Ukukhupha iipolgoni ezikhoyo kwi-CAD (1), unokwenza le nkqubo elandelayo njengoko yenza njalo kwi-ArcMap: iqhosha lasekunene kwinqanaba - Idatha - Ukuthumela izinto, ibonisa indlela yokuphuma kunye nomfanekiso we-polygon uza kubonakala kwipaneli yakho yomxholo.
Kulo mzekelo, umaleko eyenziwe yeepolygons ekuqaleni kule fayile CAD ehambelana izakhiwo, Noko ke, xa polylines kwakhona kwi CAD yokuqala ilahlekile eneepoligoni ezimbini (2):
Kwimeko apho iifolongo ezivela kwifayili ye-CAD ziyaziwa:
Kwi-CAD Layers tab, isixhobo Faka kwiPolygon, esi sixhobo sisetyenziswe xa kukho ukuqinisekiswa kwedatha evela kwi-CAD, sifuna kwifomati ye-polygon. Xa uqhuba inkqubo, iphaneli ivuliwe, apho icela ukuba ichaze ukuba yeyiphi na iindawo okanye iindawo ezizoguqulwa.
Ibhokisi ihlolwe ukuba ufuna ukugcina iimpawu zeCAD, i-ArcGIS Pro igcine inani leenkalo ngesitayela esithile salolu hlobo lwedatha.
Ukuba amaziko anxulumene nezichasiselo okanye iilebula ze-CAD, ezi mabalethi zingagcinwa ngendlela eza kwenziwa.
Kule meko, iFayili yeCAD "ukuphosa", Ngenkqubo yangaphambili kunokwenzeka ukukhipha ipoloni enye, ekubeni isixhobo asiqapheli esinye isakhiwo kuba sivulekile, oko kukuthi, asiyiyo ipolgoni epheleleyo. ngokuba olu luhlu oludalwe ngama-polygons luye lwahlelwa kwaye uphawu luyadalwa.
Kwimeko ye-lagoon, ungakhetha iipollines ezenzayo kwaye zisebenzise isixhobo sokwenza umlo ngefomati ye-polygon.
Kwenzeka ntoni ngale sixhobo, kukuba kufuneka ube nokukhuseleka ngokupheleleyo kweziphi iipolgoni; ukuba kungenjalo, kuya kuvelisa ulwahlulo kunye neephoso ze-topology, kuba iinkampani zobunqamana zidibanisana, njengoko kuboniswa kumzekelo xa uzama ukuguqula zonke izixhobo ze-CAD ngesi sixhobo:
Kulawulwa, kwiindawo ezizimfama ezizenzekelayo
Emva kokuqhuba iinkqubo ezihambelana noluhlu ngalunye siya kuba nale ilandelayo:
Ubume beenjongo kwifomati ye-polygon
Imilambo kwifomati ye-polyline
Izakhiwo kwifomathi yefomathi
Igoboni kwifomati yefolda.
Ngoku sinako ukusebenza kwaye senze uhlalutyo olufunekayo, sithathela ingqalelo ukubaluleka kwemvelaphi yedatha, zombini ifomathi kunye nokuhambelana kwayo nokuma. Khuphela apha i umphumo wokuphuma.
Esi sifundo sithathwe kwisifundo se-13 Inkambo ye-Easy ArcGIS Pro, ebandakanya ividiyo kunye nengcaciso yenyathelo ngenyathelo. Ikhosi iyafumaneka ngesiNgesi y en Español.
I-Digital Twin-BIM + GIS-imigaqo eyavakala kwiNkomfa yase-Esri-Barcelona 2019
Thelekisa ubukhulu bamazwe
Iziganeko zeGeospatial Juni 2008